Hammangaawwan bahaa DataPilot filachuu
Qabduu Dabalata qaaqa DataPilot keessaa cuqaasi. Qaaqni ni babal'ata.
Hammanga moggaafame kan gabateen DataPilot keessatti uumamuuf jedhu filachuu dandeessa, sanduuqa Bu'aalee gara irraa. Yoo hammangaan bu'aalee maqaa hin qabu ta'e, walgitoonni maadhee gubbaa bitaa hammangaa gara dirree mirga sanduuqa Bu'aalee gara galchi. Akka walgitoonni galaniif maadhee sirrii ta'e irratti cuqaasuus dandeessa.
Yoo sanduuqa filannoo Tarreewwan duwwaa tuffadhu mallatteessite, yeroo gabateen DataPilot uumamu xiyyeeffannaa keessa hin galan.
Yoo sanduuqni filannoo Akaakuuwwan addaan baasi mallattaa'e, akaakuuwwan irraantota isaaniitiin addaan baasamanii yeroo DataPilot uumamu ramadu.
Gabateewwan DataPilot uumuu
Gabateewwan DataPilot Gulaaluu
Gabateewwan DataPilot Gingilchuu
Gabateewwan DataPilot Gareessuu
Ganateewwan DataPilot fooyyessuu
Gabateewwan DataPilot Haquu
Title is: Hammangaawwan bahaa DataPilot filachuu